Ogaden News Agency (ONA) – johanesburg shirkii faraca iyo doorasho maamulcusub sanadakan 2012
johanesburg shirkii faraca iyo doorasho maamulcusub sanadakan 2012
Shirka oo ku bilowday jawi aad u wanaagsan ooy ka muuqato farxad iyo qiiro wada jira ayaa lagu furay wacddi diini ah oo qiima badan. Sheekha dadka wacdiyay ayaa ku dheeraaday inuu ka hadlo dambiyada waa wayn ee 7 bada ah ooy ka mid yihiin Zinada, waalidka oo caaq lagu noqdo ,ruux xaq darro lagu dilo,maalinta cadowga la is helo oo la cararo iwm.
Kadib waxaa laguda galay warbixin sanadeedkii ay soo diyaarisay guddida soo haysay xilka iyo shaqoyinki ay qabteen . Warbixintaas oo xogog badan laga bixiyay dhinaca abaabulka bulshada iyo horumarki ay gaadhay jaaliyadu ayaa aheyd warbixin si qorsheysan loo soo diyaariyay. Xubnaha Jaaliyada ayaa soo dhaweyay warbixinti maamulka kuna amaanay shaqadi wanaagsaneyd ay ummada u hayeen.
Wadanka South afrika ayaa ah wadan ay kusuganyihin bulsho tiro badan oo kasoo jeeda Somalida Ogadeniya. Kuwaas oo badankoodu kasoo qaxeen dhibaatoyinka gumeysi. Hadaba dadka oo waqti badan heyn oo shaqooyin ku jira afar iyo labaatanka saac todobada maalmoodba ayaa hadana xubnaha maamulka Jaaliyadu ay yihiin dad aan shaqooyin kale qaban oo waqtigooda u huray sidii ay jaaliyada iyo ummadi ay kasoo tageenba ugu shaqeyn lahaayeen gumaysigana ay ula dagaalami lahaayeen.
Shirkan oo dhamaan xubnihii Jaaliyadu ay u wada joogeen ayaa waxa mar kale sanadkan la doortay maamul cusub oo hagi doona jaaliyada ogaadeeniya ee koonfruta Afrika gobolka Gauteng waxaana lagu doortay goobta guddida xubno ay u arkeen inay kasoo bixi karaan xilka loo doortay, waxaana gudoomiye looga dhigay duqa jaaliyada JOKA Halgame Cabdirashid.
Guddida ladoortay ayaa ka ballan qaaday xubnaha hortooda inay kasoo bixi doonaan xilka loo dhiibay iyagoo ka codsaday xubnahana inay la shaqeeyaan .
waxaa gabagabadii lagu dardaarmay in si wada jir aha looga shaqeeyo sidii wadanka ogaadeeniya loo xoraynlahaa sannadkan 2012 ka.